भेस्पा र एप्रोलिया स्कुटर किन्नुहोस् यो दसैंतिहारमा युरोप घुम्नुहोस् – Tandav News
भेस्पा र एप्रोलिया स्कुटर किन्नुहोस् यो दसैंतिहारमा युरोप घुम्नुहोस्
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ भाद्र २६ गते मंगलवार ११:२८ मा प्रकाशित
भेस्पा र एप्रोलिया स्कुटरको माग पोखरामा कस्तो छ ?
अहिलेको जेनेरेसनमा अत्याधिक नै माग छ । विशेष गरी १८ वर्षदेखि ३५ वर्षको सम्म बढी यो स्कुटर चढ्ने गरेको पाइन्छ । पोखरामात्र नभएर स्याङ्जा, लमजुङबाट पनि ग्राहक स्कुटर किन्नको लागि आउने गर्नुहुन्छ ।
अन्य स्कुटर भन्दा यसमा के फरक छ ?
भेस्पा र एप्रोलियालाई प्रिमियम प्रोडक्टको रुपमा लिएका छौं । यसमा धेरै फरक छ , जस्तै भेस्पाको कुरा गर्दा स्टिल बडी हो, इन्जिन, सफ्ट, फ्यूल क्यापसिटी अरु भन्दा फरक छ । भेस्पा टु ह्यल प्रोडक्ट हो । पारिवारिक देखि हरेक वर्ग, भ्याली र अफरोडको लागि अनरोडमा पनि सुइट छ । एप्रोलिया मुख्य अफरोडमा ठिक छ । यसको टायर अरु भन्दा राम्रो छ ।
यो फिचर अरुमा पाइदैन् । अफरोड मनाङ मुस्ताङसम्म एप्रोलिया पुगेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा पनि सहज पुग्ने एप्रोलिया पुग्ने गर्छ । भेस्पा भन्दा पनि एप्रोलियाको बढी माग छ । किनभने क्लिरियन्स, टायर साइज लगायत बढी गुण एप्रोलियाको छ । मूल्यको कुरा गर्दा पनि भेस्पा २ लाख ६० हजारबाट सुरु भइ ३ लाख ९६ हजारसम्म छ । एप्रोलिया २ लाख ४० हजार बाट २ लाख ८८ हजारसम्म छ ।
भेस्पा एप्रोलिया भन्दा महंगो छ । किनभने भेस्पा स्टिल बडी हो, स्टाइलिस, क्यासिक ब्रान्डको रुपमा पनि हेरिन्छ । त्यो कारणले गर्दा एप्रोलिया अल्ली सस्तो छ । एप्रोलिया आएको साढे एक वर्ष भयो ।
दसैंतिहारको लागि के–के अफर ल्याउनु भएको छ ?
दसैंतिहार लगभग सुरु भइसक्यो । साढे दुई महिनासम्म चल्नेछ । यसमा युरोप टुर देखि लिएर हन्डेडप्रतिशत क्यासप्याकको अफरहरु, एक्चेन्सह, फाइनान्समा सुविधा लगायत रहेका छन् । भविष्यमा बाइक पनि ल्याउने तयारीमा छौं । अहिले लक्की ड्र गरी दुई जना कस्टुमरलाई दिने अफर ल्याएका छौं । यो अफर अहिलेसम्मकै राम्रो र उत्कृष्ट हो जस्तो लाग्छ ।
यसको विस्तार शाखा कहाँकहाँ छ ?
पोखरामा चलेको ३ वर्ष भयो । दमौलीमा शाखा खोलेको ६ महिना भयो । दमौलीमा अत्यान्त राम्रो भएको हुँदा लमजुङमा पनि खोल्ने तयारीमा छौं । बेनीमा पनि माग भइरहेको छ ।
मुखको सास ताजा राख्न निम्न उपाय अपनाउनुहोस् : डा. विमल पन्थी